Waa maxay xiiq-dheertu? - BAARGAAL.NET
Aqoon kororsi caafimaad
✔ Admin on March 13, 2011 0 Comment
Waxa jira saddex marxaladood ama weji oo ay marto xiiq-dheertu. Wejiga kowaad (oo ah ilaa toddobaad ama laba toddobaad) waxay u bilaabantaa sidii duriga (hargabka), sanka oo qoyanaada, duuf farabadan, hindhiso, waxoogaa yar oo xummad ah, isla
markaana hargabka ayaa sii xumaada. Wejiga labaad wuxuu ka kooban yahay qufac dheer oo aan xejin Karin (paroxymsm), kaasoo marmarka qaarkood qaylo dheer u keeana (yar ahaan dhallaanka) marka uu qofku neefsanayo. Qufacaasi wuxuu keenaa
in qofka naqasku qabto, hunqaaco ama wajigiisu noqdo buluug hawada oo ku yaraatay awgeed. Inta u dhaxaysa qufacyada, qofku wuxuu u muuqdaa inuu fiican yahay. Marka qofku qufaca bilaabo wuxuu noqon karaa si aad u xun, isagoo aan
waxba cuni Karin, cabbi Karin ama neefsan karin. Xilliga dhallaanku waxaa ku dhegi kara naqaska oo suuxaan (inay neefsan kari waayaan) ama/iyo inay dhiig rooraan (jirkooda oo buluug u ekaada). Wejiga qufacu wuxuu socon karaa lix ama
in ka badan oo toddobaad. Wejiga u danbeeyaa waa marka astaamaha cudurka si fiican loo arko oo ah toddobaadyo ama bilo.
Bakteeriyada keenta xiiq-dheertu waxay ku noolaataa sanka, afka iyo cunaha, waxaana lagu faafiyaa hawada marka qof bukaa uu hindhiso, qufaco amase hadlo. Dadka u dhow markaasi waxay neefsan karaan jeermiska. Dhallaanku waxay had iyo jeer ka qaadaan xiiq-dheerta carruurta ka waawayn amase waayeelka.
Xiiq-dheertu malaha dawo. Dhallaanku waxay u baahnaan karaan in isbitaal la dhigo iyo/ama in
la siiyo kaalmo dheeri ah. Antibiyootig way caawisaa in laga hortago in cudurku
faafo oo ay dadka kale qaadaan, waana laga yaabaa inay yarayso khatarnimada
cudurka haddii la siiyo bilowga hore ee cudurka. Haddii qofku la kulmo
bakteeroyada, antibiyootiggu ma joojiyo inuu qofku qaado xiiq-dheerta. Qofka
lagu dawaynayo antiobiyootig waxay qaadsiin karaan dadka kale ilaa 5 maalmood
oo dawada ah la dhammaysto. Qof kasta oo la kulmi kara bakteeriyada waa inla
siiyaa antibiyootig si looga hortago inay qaadsiiyaan cid kale cudurka, haddii
uu ku dhacoba, xitaa hadday tallaalan yihiin. Midda kale, waxaa muhiim ah in
qofku nasto oo dareere badanna cabbo.
Haa. Qof ay hore ugu dhacday mar hore xiiq-dheertu, markale wuu qaadi karaa mustaqbalka.
Lamana oga ilaa iyo inta uu qofku ka nabdoon yahay halista xiiq-dheerta.
Carruurta iyo dadka kale ma in laga joojiyaabaa iskuulka, xannaanada, shaqada iyo
xarakaadka kale hadday qabaan xiiq-dheer?
Haa. Dadka qaba xiiq-dheerta waa in laga joojiyaa dhammaan xarakaadka ilaa shan
cisho oo antibiyootig ah ay dhammaystaan. Dadka qaba xiiq-dheerta ee aan qaadan
antibiyootig waa in laga joojiyaa hawlaha ilaa 21 maalmood lagasoo bilaabo
markuu qufacu ku bilaabmay. Xataa qofkii la kulmay hargabka iiqdheerta waa in
laga joojiyaa hawlaha ilaa uu shan maalmood oo antibiyootig ah dhammaysanayo.
Waxa jira tallaalo ka hortaga xiiq-dheerta. Tallaalka xilliga carruurnimo waxaa lala
siiyaa carruurta kan gowracatada iyo teetanada isla mara (waxaa loogu yeedhaa
DTaP). Shan qaybood oo tallaalka ah baa la siiyaa, lagasoo bilaabo markuu
ilmuhu jiro laba bilood, si looga ilaaliya xiiq-dheerta. Tallaalku wuu anfacaa
carruurta badankooda, laakiinse wuxuu marmarka qaarkood jabaa sannado ka dib.
Tallaalka carruurnimo ee DTaP lama siiyo qofkii ah 7 sannadood iyo wixii ka
Tallaalka xiiq-dheerta ee dhallinyarada iyo waayeelka qudhiisa waxaa lala bixiyaa
gowracatada iyo teetanada (Tdap). Waxaa dhallinta lagu taliyaa inay helaan qayb
kaliya oo tallaalka ah da’da u dhaxaysa 11 ilaa 12 sannadood si ay uga
Waayeelka qudhoodu waa la siiyaa Tdap.